पैसा जोगाउन चाहानुन्छ ? यस्ता चिज पर्समा राख्नुहोस पैसाले कहिल्यै छोड्ने छैन साथ – Complete Nepali News Portal
पैसा जोगाउन चाहानुन्छ ? यस्ता चिज पर्समा राख्नुहोस पैसाले कहिल्यै छोड्ने छैन साथ
धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउने चाहाना हरेकको हुन्छ र यसको लागि मानिसले कडा परिश्रम पनि गर्छ। तर पैसा कमाउँदा पनि कयौँपल्ट तपाईको पैसा नबच्ने समस्या हुनसक्छ। शास्त्रको अनुसार यस्तो केही चिजहरु छन् जसलाई तपाईले आफ्नो पकेटमा राख्नाले धन जोगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आफ्नो साथमा यस्ता ५ चीज राख्नु भयो भने तपाइको कहिल्यै पनि हात खाली हुनेछैन।
यदि तपाई तपाईको काम र धन टिकिरहोस् भन्ने चाहानुहुन्छ भने आफ्नो पर्समा धनकी देवी लक्ष्मीको तस्वीर राख्नुहोस्।माता लक्ष्मीको कृपाले तपाईको पर्स कहिल्यै पनि खाली हुँदैन। साथै नयाँ मार्गबाट धन कमाउने मौका समेत मिल्छ।